Mashandisiro ekushandisa kure kure kudzora Apple TV 4 | IPhone nhau
Pamusoro peiyo yayo App Store, iyo Chizvarwa chechina Apple TV ine imwe yakasarudzika yakasarudzika: iyo Siri Kure. Mutungamiriri mutsva weApple set-yepamusoro bhokisi idiki, diki uye diki kwazvo. Iwe unofanirwa kuve wakangwarira nayo nekuti haina kuoma kuirasa pamasofa emasofa kana, kana isu tine rombo rakaipa, inogona kuwira pasi uye iyo yekubata pamusoro inogona kutyoka. Uye chii chatinoita kana tisingakwanise kushandisa iyo Siri Remote? Zvakanaka, isu tinogona kuita chimwe chinhu tisati tarasikirwa nacho, senge inishuwarenzi, inova yekugadzirisa old remote yekushandisa neApple TV 4 kana iwe ukarasikirwa neyako yekutanga kure. PaApple TV 3 tinogona kushandisa Remote app kuidzora, asi izvo hazvigoneke pachizvarwa chechina.
Mashandisiro ekushandisa kure yekare kudzora Apple TV 4
Isu tinobatidza iyo Apple TV (Doh!).
Tiri kuenda Zvirongwa.
Takapinda Kudzora uye zvishandiso.
Zvino regai Remote control.
Mune inotevera nhanho isu tinodzvanya makiyi atinoda kune yega yebasa. Sezvauri kuona mumufananidzo unotevera, zvinotikumbira kudzvanya kumusoro, pasi, kuruboshwe, kurudyi, sarudza uye mabhatani emenyu. Kurekodha bhatani isu tinokanda pariri kana iri nguva yako kusvika pakapfuurira mberi bhaa razara. Kana kiyi yekutanga yekurekodha yapera, tinogona kunyora makiyi ekutamba kana tichida.
Kana kiyi yekutanga yekurekodha yapera, tinogona kunyora makiyi ekutamba kana tichida.
Uye ndizvozvo. Pasina mubvunzo, kana usati wave neApple TV kubva kune imwe modhi yapfuura, sezvazviri nyaya yangu, zvakakodzera kutora matanho uye kurekodha imwe nzira yekuraira "zvingangoitika". Iko hakuna basa kuve neakakura chishandiso senge iyo ATV4 kana isu tisingakwanise kuita chero chinhu kunze kweAirPlay, chinova chinhu chingaitwe uchishandisa chete yedu iPhone, iPod kana iPad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Mashandisiro ekushandisa kure kure kudzora Apple TV 4
Maitiro ekuisa MovieBox pane iPhone neIOS 9 isina Jailbreak